Mashiinada Qamandiga Gooya Oo La gudoonsiiyay 4 Degmo - Cakaara News
Mashiinada Qamandiga Gooya Oo La gudoonsiiyay 4 Degmo
Jigjiga(cakaaranews)jimce 16ka, September 2016. Xafiiska Horumarinta Beeraha iyo Khayraadka Dabiiciga ah DDSI oo kaduulaya qorshayaashiisa ku aadan waxsoosaarka iyo ladagaalanka saboolnimada ayaa maanta mashiinada gooya beeraha ee looyaqaano (Combine Harvester) gudooon siiyay 4 degmo oo kala ah jigjiga, Awbare, Tuliguuleed, iyo waliba Dheka-soft.
Hadaba, gudoonsiinta mashiinadan ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay Gadhwadeenka G/S Fidinta Beeraha iyo Farsamooyinka Casriga ah ee Xafiiska Horumarinta Beeraha iyoKhayraadka Dabiiciga ah mudane Axmednuur Mahad Cali oo sheegay in maanta ay gudoonsiiyeen 4ta degmo ee kala ah jgjiga, awbare, tuliguuleed, iyo dhekasoft mashiinada gooya beeraha qamandida ah ee looyaqaano combine harvester. Wuxuuna intaa kudaray in ay maanta kuwareejiyeen 4ta degmo gudoomiyeyaashooda islamarkaana si cadaalad ah oo nasiib ah ay gacantooda ugu kalaqaateen.
Sidookale, gadhwadeenka ayaa xusay in mashiinadani ay waxwayn katari doonan gooynta dalagyada qamandida iwm islamarkaana ay faaiido balaadhan u yeelan doonaan degmooyinka caanka ku ah waxsoosaarka qamandida isagoo carabka kudhuftay in mashiinadani ayna noqon doonin kuwii ugu danbeeyay ee xafiisku gaadhsiiyo degmooyinka oo ay jiri doonaan mashiino kale oo iyana lagaadhsiin doono degmooyinka kale.
Ugudanbayna waxaa iyana dareenkooda kahadlay gudoomiye yaasha 4ta degmo oo sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin mashiinadan ay gudoomeen islamarkaana ay u mahadcelinayaan xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI. Waxayna tilmaameen in mashiinadan ay ilaashanayaan islamrkaana ay adeega u bixindoonaan si cadaalad ah.